Maalinta Umulisooyinka Adduunka oo Maanta laga xusay Garowe – Radio Daljir
Maajo 5, 2015 9:27 b 0
Talaado, May 05, 2015 (Daljir) — Munaaabad lagu xusayay Maalinta caalamiga ah ee Ummulisooyinka Aduunka ee loo Asteyey 5-Bisha May ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee Garowe Garoowe.
Xaawo Yuusuf oo ah ku simaha agaasimaha ururka u mulisooyinka Puntland ayaa sheegtay ururkaan inay aas aastay wasaaradda caafimaadka Puntland, iyadoo sheegtay sababtii loo aas aasa inay tahay, in hoos loo dhigo dhimashada dhallaanka iyo hooyada, gudniinka hablaha iyo farsamo xumada umulisooyinka.
Waxaa kale oo ay sheegtay inay xafladaan kusoo bandhigayaan caqabadaha haysta umulisooyinka Puntland, in la helo siyaasad qaran oo midaysan oo ay raacaan dadka umulisooyinka ah iyo sidoo kale in dhaqaale loo helo dadkii loo tababaray inay umulisooyin noqdaan.
Drs, Xabiibo Nuux Ismaaciil oo ka hadashay munaasabada ayaa sheegtay in loo baahan yahay umuliso kasta oo tababaran inay ka shaqeyso xarumaha hooyada iyo dhallaanka, halkii ay hooyooyinka ku dhalin lahaayeen guryaha, taaso sababi kara dhimashada hooyada iyo dhallaanka.
Wasiiru dowlaha Wasaradda Caafimaadka Puntland ayaa wasaaradda caafimaadka Puntland inay ka go’an tahay udoodida, uqareemida hooyada iyo dhallaanka Puntland, Waxaana uu intaas ku daray wasaaradda caafimaadku inay ku guulaystay in adeega hooyada dhallaanka uu noqday adeeg bilaash ah.